Momba anay - TSINFA
Eto ianao: an-trano1 / Momba ANAY
Shandong TSINFA CNC Equipment Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2000, ny vokatra milina fanodinana ankapobeny ho an'ny orinasa manomboka ny vokatra, amin'ny fampivoarana ny fanavaozana mitohy, amin'ny alàlan'ny fikarohana tsy miankina sy ny famokarana fampandrosoana, ny asan'ny marika ary ny fomba hafa hanitarana ny tsipika vokatra . Ny vokatra dia manarona fanapahana metaly sy metaly mamorona karazany roa, grinder boribory lasantsy, tavoahangin-tavoahangy tarehy, cnc lathe, cnc centres milina telo-axis, masinina miisa efatra axis cnc, milina fandavahana radial, fandriana boribory, mpamorona, latina mahazatra, fikosoham-bary manerantany masinina, milina fanodinana fitrandrahana, press Press. Amidy eny amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena ny vokatra.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, nifantoka tamin'ny famokarana avo lenta sy ny varotra ny fitaovana milina CNC, ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny milina ary ny fampandrosoana ny orinasa. Namolavola ny andiam-pandrefesana fikosoham-bary TFA ary manodinkodina ny foibe fitodihana, andiany BK misy fandriana CNC efatra-axis, hamaly ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny fanodinana mahomby. Ny sandanay sy ny tanjontsika dia ny hamoronana endrika mahomby ho an'ny mpampiasa sy ny mpanjifa, hanatsara ny sanda vokatra sy ny orinasa amin'ny famolavolana sy ny fanavaozana ny serivisy.
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny fahamendrehan'ny kalitao, hahazoana antoka fa ny fitaovana tsirairay dia mendrika ny orinasa, mba hahazoana antoka fa afaka manao ny tsara indrindra ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa izy ireo.
Afaka manome fitaovana milina isika ao anatin'izany:
Masinina fanapahana vy
Masinina mamorona vy
Masinina fanenjanana tarika
Lathe mitsangana CNC,
Milina ary atsofony
Masinina fanodinana universal sy ny sisa.
Efa za-draharaha nandritra ny taona maro nangonina sy nitombo, efa lasa mpamatsy fitaovana milina sy vahaolana ho an'ny mpanjifanay izahay, nihatsara hatrany ny kalitao, nihatsara koa ny foto-kevitra momba ny famolavolana ary ny teknolojia fanodinana.
Miaraka amin'ny fanitarana ny ambaratongam-pamokarana, dia namolavola na nividy fitaovana avo lenta avo lenta izahay, ao anatin'izany ny milina fanodinkodinana / milina mankaleo, ny fametahana torolàlana mazava tsara, ny milina fanodinana lohany sivy sns.
Ampiasaina amin'ny milina fanodinana gorodona / milina mankaleo be dia be, dia ny fahafahantsika mamokatra latina marindrano lehibe mitsivalana sy milina fikosoham-bolo.
Ny milina fitotoana torolàlana avo lenta avo lenta dia ampiasaina amin'ny fikolokoloana lalamby fitarihana torimaso fandriana, mitazona ny marina tsara.
Ampiasaina amin'ny milina fikosoham-bolo sivy, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana lovia latina marindrano be, indray mandeha maninjitra, aorian'ny milina fitotoana torolàlana lehibe ho an'ny famitana milina.
Masinina manokana ho an'ny fanodinana boaty lohan'ny lathe, ataovy boaty loha indray mandeha indray mandeha, nitombo be ny fahombiazan'ny famokarana.
Fitaovana fanaraha-maso kalitao:
nanambola vola be izahay hividianana fitaovana fanaraha-maso kalitao manerantany, toy ny sandry fandrefesana, ny fifandanjana mavitrika, ny fanelanelananan'ny laser Renishaw, sns., alao antoka fa voadinika tsara ny fitaovan'ny masinina tsirairay.